Ungayakha Kanjani, Uyibhale Futhi Uyishicilele kanjani i-Ebook Yakho Usebenzisa i-Google Amadokhumenti | Martech Zone
Uma wehle ngomgwaqo wokubhala nokushicilela i-ebook, uyazi ukuthi ukuxubana nezinhlobo zamafayela we-EPUB, ukuguqulwa, ukuklanywa nokusatshalaliswa akuyona eyenhliziyo encane. Kunezixazululo eziningi ze-ebook laphaya ezizokusiza kwinqubo futhi uthole i-ebook yakho ku-Google Play Books, i-Kindle namanye amadivayisi.
Ama-ebook ayindlela enhle yokuthi izinkampani zibeke igunya lazo esikhaleni sazo futhi ziyindlela enhle yokuthwebula imininingwane yethemba ngamakhasi okufika. Ama-ebook ahlinzeka ngemininingwane ejulile kune-whitepaper elula noma ukubuka konke kwe-infographic. Ukubhala i-ebook futhi kuvula izethameli ezintsha ngokuphelele ngeziteshi zokusabalalisa ze-eBook zeGoogle, i-Amazon ne-Apple.
Kukhona ithani labenzi bezinqumo laphaya abafuna izihloko maqondana nomkhakha wakho kanye nokufunda ama-ebook ahambisanayo. Ingabe izimbangi zakho sezivele zikhona? Kukhona ithuba elihle lokuthi ungathola i-niche enhle nesihloko ongasishicilela okungekho omunye umuntu okwamanje.
Okuhle kunakho konke, akudingeki ukuthi uqashe i-ebook design, ukumaketha, kanye nensizakalo yokukhuthaza… ungavele uvule iDoc entsha usebenzise Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle akhawunti bese uqala ukuklama, ukubhala nokuthumela ifayili elidingekayo olidingayo ukuze ushicilele i-ebook lakho nganoma yimiphi imithombo esemqoka yokusabalalisa online.
Izinyathelo Zokushicilela I-Ebook Yakho
Angikholwa ukuthi kunomehluko omkhulu isu lokubhala i-ebook njenganoma iyiphi enye incwadi… izinyathelo ziyafana. Ama-ebook ezinkampani angahle abe mafushane, aqondiswe kakhulu, futhi anikeze umgomo othile kunenoveli yakho ejwayelekile noma enye incwadi. Uzofuna ukugxila ekwakhiweni kwakho, ekuhlelweni kokuqukethwe kwakho, nakwikhono layo lokukhuthaza umfundi wakho ukuthi athathe isinyathelo esilandelayo.
Hlela incwadi yakho - hlela izihloko ezisemqoka kanye nezihlokwana ngokwemvelo ukuhola umfundi wakho ngokuqukethwe. Ngokwami, ngikwenze lokhu ngencwadi yami ngokudweba umdwebo wethambo lenhlanzi.
Hlela ukubhala kwakho - ukwahlukanisa okungaguquguquki, i-verbiage, kanye nephuzu lokubuka (owokuqala, owesibili, noma owesithathu).
Bhala okusalungiswa - hlela isikhathi nemigomo yokuthi uzoqedela kanjani okusalungiswa kokuqala kwencwadi yakho.
Hlola uhlelo lwakho lolimi nesipelingi - ngaphambi kokusabalalisa noma ukushicilela i-ebook eyodwa, sebenzisa isihleli esihle noma insiza efana nayo Grammarly ukukhomba nokulungisa noma yimaphi amaphutha esipelingi noma ohlelo lolimi.
Thola impendulo - hambisa okusalungiswa kwakho (ngesivumelwano esingadalulwanga) kwizisetshenziswa ezethembekile ezinganikeza impendulo ngalokhu okusalungiswa. Iyasabalalisa ku- -Google Docs iphelele ngoba abantu bangangeza imibono ngqo kusixhumi esibonakalayo.
Buyekeza okusalungiswa kwakho - usebenzisa impendulo, buyekeza okusalungiswa kwakho.
Thuthukisa okusalungiswa kwakho - ungafaka amathiphu, izinsiza kusebenza, noma izibalo kuyo yonke ikhophi yakho?
Yakha ikhava yakho - cela usizo lomklami omkhulu wezithombe futhi wakhe izinhlobo ezimbalwa ezahlukahlukene. Buza inethiwekhi yakho ukuthi iyiphi ephoqa kakhulu.
Thenga okushicilelwe kwakho - cwaninga amanye ama-ebook afana nelakho ukuze ubone ukuthi athengisa malini. Noma ngabe ubucabanga ukuthi ukusatshalaliswa kwamahhala kungaba yindlela yakho ozohamba ngayo - ukuthengisa kungaletha ubuqiniso obuningi kukho.
Qoqa ubufakazi - thola abanye abathonya nabachwepheshe bemboni abangabhala ubufakazi be-ebook yakho - mhlawumbe nokudlulisela phambili kumholi. Ubufakazi babo buzongeza ukwethembeka ku-ebook yakho.
Dala i-akhawunti yakho yombhali - ngezansi uzothola amasayithi angukhiye wokwakha ama-akhawunti wombhali namakhasi wephrofayili lapho ungalayisha khona i-ebook yakho bese uyathengisa.
Rekhoda isingeniso sevidiyo - dala isingeniso sevidiyo esinikeza ukubuka konke nge-ebook lakho ngokulindela kwabafundi.
Thuthukisa isu lokumaketha - thola abakhombisi, izitolo zezindaba, ama-podcasters, nabadwebi bevidiyo abathanda ukukuxoxisana nawe ngokuqwashisa nge-ebook yakho. Ungahle ufune nokubeka okunye okukhangisayo nokuthunyelwe kwezivakashi lapho kwethulwa khona.
Khetha i-hashtag - Dala i-hashtag emfushane, ephoqelelayo yokwazisa nokwabelana ngolwazi mayelana nonyaka we-ebook online.
Khetha idethi yokuqalisa - uma ukhetha usuku lokuqalisa futhi ungashayela ukuthengisa ngalolo suku lokuqalisa, ungathola i-ebook yakho ifike kufayela le- okudayiswa kakhulu isimo se-spike yayo ekulandweni.
Khipha i-ebook yakho - dedela i-ebook bese uqhubeka nokwenyusa kwakho incwadi ngokusebenzisa izingxoxo, izibuyekezo zezokuxhumana, ukukhangisa, izinkulumo, njll.
Bandakanya nomphakathi wakho - bonga abalandeli bakho, abantu ababukeza ibhuku lakho, bese beqhubeka ukunanela futhi baliphakamise isikhathi eside ngangokunokwenzeka!
Ithiphu le-Pro: Abanye bababhali abamangalisayo engihlangane nabo bavame ukuba nabahleli bemicimbi nabezinkomfa bathengela labo abazobe bekhona izincwadi kunokuba (noma ngaphezu kwalokho) babakhokhele ukuze bakhulume emcimbini. Le yindlela enhle yokwandisa ukusatshalaliswa nokuthengiswa kwe-ebook yakho!
Yini ifomethi yefayela le-EPUB?
Into ebalulekile ekusatshalalisweni kwe-ebook yakho ukuklama i-ebook namandla ayo okuthekelisa ngokuhlanzekile ngefomethi yendawo yonke ezitolo zezincwadi eziku-inthanethi ezingayisebenzisa. I-EPUB yileli zinga.
EPUB yifomethi ye-XHTML esebenzisa isandiso sefayela le-.epub. I-EPUB isifushane nge ukushicilelwa ngogesi. I-EPUB isekelwa iningi labafundi be-e, futhi isoftware ehambisanayo iyatholakala kuma-smartphones amaningi, amaphilisi, namakhompyutha. I-EPUB iyizinga elishicilelwa yi-International Digital Publishing Forum (IDPF) kanye ne-Book Industry Study Group evumela i-EPUB 3 njengezinga elilodwa lokuzikhethela lokuqukethwe okupakishwayo
Ukuklama i-Ebook yakho ku-Google Amadokhumenti
Abasebenzisi bavame ukuvula -Google Docs futhi ungasebenzisi amakhono akhiwe ngokufometha. Uma ubhala i-ebook, kufanele.
Dizayina okuphoqayo Ikhava nge-ebook lakho ekhasini lalo.
Sebenzisa into yesihloko ye-ebook yakho kufayela le- Isihloko Ikhasi.
Sebenzisa izihloko nezihloko zezinhlamvu ze-ebook nezinombolo zekhasi.
Sebenzisa i-Heading 1 element bese ubhala ifayili le- ukuzinikezela ekhasini layo.
Sebenzisa i-Heading 1 element bese ubhala eyakho ukuvuma ekhasini layo.
Sebenzisa i-Heading 1 element bese ubhala ifayili le- phambili ekhasini layo.
Sebenzisa isihloko se-Heading 1 ku- izihloko zesahluko.
Sebenzisa le Okuqukethwe into.
Sebenzisa le Imibhalo yaphansi element for izinkomba. Qiniseka ukuthi unemvume yokushicilela kabusha noma yiziphi izingcaphuno noma olunye ulwazi olushicilela kabusha.
Sebenzisa i-Heading 1 element bese ubhala i Mayelana Nombhali ekhasini layo. Qiniseka ukuthi ufaka ezinye izihloko ozibhalile, izixhumanisi zakho zokuxhumana nabantu, nokuthi abantu bangaxhumana nawe kanjani.
Qiniseka ukuthi ufaka amakhefu lapho kudingeka khona. Lapho uthola idokhumenti yakho ibheka ngqo ukuthi ungayithanda kanjani, yishicilele njenge-PDF kuqala ukubona ukuthi ibukeka kahle ngendlela ongayithanda ngayo.
Ukuthunyelwa Kwe-Google Amadokhumenti EPUB
Usebenzisa i-Google Amadokhumenti, manje usungakwazi ukubhala, ukuklama, nokushicilela kusuka kunoma yiliphi ifayela lombhalo noma idokhumenti elayishwe ngqo ku-Google Drayivu yakho. Oh - futhi kumahhala!
Nakhu Ukuthekelisa I-Ebook Yakho Usebenzisa i-Google Amadokhumenti
Bhala umbhalo wakho - Ngenisa noma imuphi umbhalo osuselwa embhalweni ungaguqulwa ube yi-Google Amadokhumenti. Zizwe ukhululekile ukubhala incwadi yakho nge -Google Docs ngqo, ukungenisa noma ukuvumelanisa Microsoft Word imibhalo noma sebenzisa noma yimuphi omunye umthombo i-Google Drayivu ekwaziyo ukuwucubungula
Thumela njenge-EPUB - IGoogle Docs manje isinikeza i-EPUB njengefomethi yefayela lokuthekelisa lendabuko. Vele ukhethe Ifayela> Landa njenge, khona-ke Ukushicilelwa kwe-EPUB (.epub) futhi usukulungele ukuhamba!
Qinisekisa i-EPUB yakho - Ngaphambi kokuthi ulayishe i-EPUB yakho kunoma iyiphi insizakalo, uzofuna ukuqinisekisa ukuthi ihlelwe kahle. Sebenzisa i-inthanethi Isiqinisekisi se-EPUB ukuqinisekisa ukuthi awunazinkinga.
Ungayishicilela kuphi i-EPUB yakho
Manje njengoba usunefayela lakho le-EPUB, manje udinga ukushicilela i-Ebook ngezinsizakalo eziningi. Izitolo eziphezulu zokutholwa yilezi:
Kindle Ukushicilela Okuqondile - zishicilele ama-eBooks nama-paperbacks mahhala nge-Kindle Direct Publishing, futhi ufinyelele izigidi zabafundi ku-Amazon.
Ingosi Yokushicilela Yezincwadi ze-Apple - indawo eyodwa yazo zonke izincwadi ozithandayo, kanye nalezo osuzokwenza.
Amabhuku we-Google Play - ehlanganiswe ngaphakathi kwesitolo esibanzi seGoogle Play.
Smashwords - umsabalalisi omkhulu kunayo yonke we-indie ebook. Sikwenza kusheshe, kumahhala futhi kube lula kunoma imuphi umbhali noma umshicileli, noma kuphi emhlabeni, ukushicilela nokusabalalisa ama-ebook kubathengisi abakhulu nezinkulungwane zemitapo yolwazi.
Ngingancoma kakhulu ukuqopha ividiyo ukwethula ibhuku lakho, ukusetha okulindelwe kokuqukethwe, nokushayela abantu ukuthi balande noma bathenge i-ebook. Futhi, dala umlobi omkhulu we-bio kunoma iyiphi insizakalo yokushicilela evumela lokho.
Ukudalula: Ngisebenzisa isixhumanisi sami sokuxhumana Indawo Yokusebenzela yakwaGoogle.
Tags: Amazonizincwadi ze-amazonandroidi-apulaizincwadi ze-apulai-ebookebooksepubukuguqulwa kwe-epubepub isiguquliIsiqinisekisi se-Epubepublication-Google DriveAmabhuku we-Google PlayindlelaIsitolo se-iBooksKindleliberioshicilela i-ebookshicilela i-ebupxhtml
I-WordPress: Shumeka isidlali seMP3 kubhulogi lakho lokuthunyelwe
Jul 24, 2014 ngo-4: 24 PM
Iposi Elikhulu, Thanx!
Dec 9, 2015 ngo-8: 17 PM
Singayenza incwadi kuma-google amadokhumenti?
Dec 10, 2015 ku-12: 07 AM
Ngikholwa ukuthi bamunye manje, Maryam!
Jan 22, 2021 ku-9: 55 AM
Lokhu kuvelele. Lokho ebengikudinga manje.
UPurna Lal Chakma
Mar 20, 2021 ku-4: 49 AM
Kuhle. Kuyasiza ngokumangalisayo. Ngiyabonga kakhulu 🌹
May 25, 2021 ku-7: 35 PM
Nginamakhasi angama-300 anezithombe ezincane ekhasini ngalinye. Isikhungo sokuqinisekisa sithi ngaphansi kuka-12MB. Ngabe amadokhumenti wami wokugqogqa azoba makhulu kakhulu. Ngizinciphisa kanjani izithombe. Zisikiwe kepha isithombe sonke sikhona ..
Jun 2, 2021 ku-12: 50 PM
Kunamathuluzi amaningi ku-inthanethi okuncipha kosayizi wesithombe, kepha ikakhulukazi awokukhishwa kwekhwalithi kwesikrini… okuyi-72 dpi ekugcineni okuphansi. Amadivayisi amasha angama-300 + dpi. Uma othile efisa ukuphrinta i-ebook yakho, khona-ke i-300dpi yinhle. Ngizoqinisekisa ukuthi ubukhulu besithombe sami abukhulu kunosayizi wedokhumenti (ngakho-ke ungayifaki futhi uyinciphise… uyikhulise kabusha ngaphandle kwe-ebook yakho, bese uyinamathisela lapho). Bese ucindezela isithombe. Ithuluzi lokucindezelwa kwesithombe engilisebenzisayo yi- Kraken.